Ny Samsung Galaxy Sport dia azo aseho miaraka amin'ny Galaxy S10 | Androidsis
Nandritra ny volana maromaro dia niresaka momba ny fahafahan'ny orinasan-tserasera Koreana mandefa smartwatch vaovao ao anatin'ny faritry ny Galaxy Watch, faritra iray izay manolo ny Gear amin'ny resaka smartwatches. Ny fanovana anarana dia avy amin'ny tanan'ny Galaxy Watch, smartwatch izay natolotra ny volana aogositra lasa teo niaraka tamin'ny Galaxy Note 9.
Hatramin'ny faran'ny volana desambra dia namoaka lahatsoratra samihafa izahay izay niresaka momba ny Galaxy Sport, ny kinova fanatanjahan-tena amin'ny Galaxy Watch izay mety hiasan'ny Samsung volana vitsivitsy. Ity fitaovana ity dia saika hatolotra amin'ny fomba ofisialy, satria vao nandalo ny fitsapana US FCC.
Ny FCC dia tsy maintsy mamakafaka mba hanamarinana avy eo fa ny fitaovana rehetra amidy ao amin'ny firenena, mahafeno andiana fepetra takiana. Raha heverintsika fa ny Galaxy S10 (sy ny karazany hafa) dia haseho any San Francisco amin'ny 20 febroary, ny zava-drehetra dia manondro fa amin'io hetsika io dia azon'izy ireo atao ihany koa ny manolotra ny andian'ny Sport an'ny Galaxy Watch.
The Galaxy Sport hifantoka amin'ny fanarahana hetsika ara-batana, toy ny teo alohany, ny Gear Sport, ka amin'ny laharana misy ireo fitaovana azo ampitaina avy amin'ny Samsung, dia ho eo ambanin'ny Galaxy Watch.
Ity modely ity dia hanana tahiry 4 GB ary hamoaka ny mifanentana amin'ny Bixby, hanolorana fampandrenesana mitovy amin'ny telefaona smartphone sy ny smartwatch, fiasa iray izay azo inoana fa hahatratra ny Galaxy Watch miaraka amin'ny fanavaozana tsotra ihany koa.
Saingy azo inoana fa hampiditra kinova vaovao amin'ny bracelet Gear Fit quantizer ihany koa i Samsung ho fanampin'ny a fanavaozana ny IconX, Fampandehanana finday tsy misy tariby an'ny Samsung izay ahafahantsika mampifandray amin'ny smartwatches an'ny orinasa mba hihainoana ny mozika ankafizintsika rehefa mandeha mihazakazaka isika, mankanesa any amin'ny gym ... nefa tsy mila mitondra finday finday avo lenta miaraka amintsika foana isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ny Samsung Galaxy Sport dia azo aseho miaraka amin'ny Galaxy S10
Ny tantara Instagram dia mamoaka sivana mihetsika vaovao ho an'ireo sary ao amin'ny galerianao